Nei vanhu vazhinji vachisarudza aluminium foil mudziyo pane wepurasitiki mudziyo?
Aluminium foil inogadzirwa kubva kune yemuno aruminiyamu chiwanikwa mushure mehuwandu hwenzira dzekuumburudza, pachayo isina inorema simbi uye nezvimwe zvinokuvadza zvinhu.Mukugadzirwa kwealuminium foil, kushandiswa kwepamusoro tembiricha inovhara disinfection maitiro, kuitira kuti iyo aluminium foil igone kuchengetedzeka kusangana na ...
Ndeipi chimiro cheallwinpack aluminium foil chigadzirwa?
Mhando dzese dzerondedzero, dzinogona kuve dzinoenderana maererano nezvinodiwa nevatengi. Saizi uye kudzika kunogona kuve kusarudza-kugona kuzadzisa zvakasiyana zvinodiwa. 2. Chikafu chegiredhi foil mudziyo chinotenderwa neDFA uye KOSHER. Kuchengetedza uye hutano, kuburikidza nekupisa tembiricha mbichana. Sezvo ichifanira kuve kusangana ne ...
Midziyo yealuminium inogona kuvezwa here mu microwave?
Hongu, hapana dambudziko. Ita shuwa kuti mudziyo wakavhurika, kudzivirira kupisa kuwedzera uye kontrakiti inotonhora inokonzeresa kuputika, usashandise zvisiri zvinhu zvakajairika semidziyo muovheni yewa microwave, zvirinani shandisa kupisa kuramba package. 1, dzivisa kugadzira epurasitiki firimu kusangana nechikafu: kana uchishandisa nyowani firimu, mune inopisa p ...